'जहाँ पनि शौचालय' :: सुधिर भण्डारी :: Setopati
'जहाँ पनि शौचालय'
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, जेठ २७
काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालय कहाँ छ भन्दा झट्ट याद आउँदैन। आए पनि ठाउँको नाम भन्न मुख चल्नुअघि नाक खुम्चिन्छ।
यो समस्या कम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा शौचालय बनाउने तयारी गर्दैछ। कहिले हो टुंगो छैन।
भक्तपुरका विनय महत र पेप्सीकोलाकी बबी थापाले यस्तो जुक्ति निकालेका छन्, जसमा नयाँ शौचालय बनाइहाल्नुपर्ने जरूरी छैन। घरघरमा बनेका शौचालय नै प्रयोग गर्न सकिनेछ।
कहाँ-कसले देला भन्ठान्नुहोला। यसको जवाफ विनय र बबीले नै दिनेछन्- एनी टाइम ट्वाइलेट अर्थात् जुनसुकै बेला शौचालयमार्फत्।
'एनी टाइम ट्वाइलेट' मोबाइल एप्स हो। यसमा तपाईंलाई आपत् परेका बेला कहाँको शौचालय जान सकिन्छ भनेर हेर्न सकिनेछ। एन्ड्रोइड फोनमा चलाउन सकिने यो एप्समा केही ठाउँ सूचिकृत छन् जहाँ सहजै शौचालय प्रयोग गर्न सकिने विनय बताउँछन्।
'हामीले अहिले ५० ठाउँमा सम्झौता गरेका छौं। सबै रेस्टुरेन्टहरू हुन्,' विनयले भने, 'विस्तारै ठाउँ बढाउँदै जानेछौं।'
बीच बाटामा आपत् परेका बेला राहत दिने यो 'आइडिया' कसरी आयो?
'यो कलेजमा फुरेको आइडिया हो,' २१ वर्षीय विनयले सुनाए।
विनय, बबी र स्मारिका नेपाल तीनै जना 'सेन्ट जेभियर्स' मा 'बिएसडब्लु' (ब्याच्लर्स इन सोसियल वर्क) पढ्दै थिए। पढाइअन्तर्गत उनीहरू विभिन्न प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइरहन्थे। एकपटक आइसेक नेपाल नामको संस्थाले 'एक्सन फर एसटिजी (सस्टेनएबल डेभलपमेन्ट गोल)' प्रतिस्पर्धा गर्यो।
'हामीले स्वच्छ वातावरण विधा छनौट गर्यौं र एउटा अवधारणा बनाएर बुझाउने तयारीमा थियौं,' उनले भने, 'तर अन्तिम समयमा हाम्रो योजना फेरियो। '
चिया खाँदै उनीहरू 'आइडिया' बारे कुरा गर्दै थिए। २२ वर्षीया बबीले काठमाडौंमा शौचालय समस्याको कुरा निकालिन्।
विनयले आफूलाई जन्डिस हुँदा धेरै पानी खानुपरेको र बारम्बार शौचालय जानुपर्दाको आपत सम्झे। उनीहरूले शौचालयसम्बन्धी नै काम गर्ने योजना बनाए। तर के गर्ने? कसरी गर्ने?
छलफलपछि उनीहरूले निचोड निकाले- एउटा एप्स बनाउने। सुरुमा रेष्टुरेन्टहरूसगँ सम्झौता गर्ने र आफ्नो एप्स प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क रेष्टुरेन्टसँग सहकार्य गराइदिने। यसको बदलामा रेष्टुरेन्टको ब्रान्डिङ हुन्छ। पछि महानगरपालिकासँग प्रस्ताव राख्ने। शौचालय समस्यामा सहयोग गरेवापत रेस्टुरेन्टहरूले केही छुट पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सकिन्छ।
उनीहरूले यही योजना प्रतिस्पर्धामा उतारे र विजेता बन्दै ५० हजार रूपैयाँ जिते।
‘हामीले त्यो पैसा एप्स बनाउन प्रयोग गर्यौं। त्यसमै पूरा पैसा सकिए पनि हाम्रो कल्पनाको पहिलो कदम साकार भयो। गुगल प्लेस्टोरमा एप्स राख्यौं,' विनयले भने।
यसैक्रममा स्मारिकाले अध्ययन व्यस्तताले समय दिन सकिनन्। विनय र बबी भने लागिनैरहे।
'रेष्टुरेन्टसँग सम्झौता गर्नु सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो,' विनयले भने, 'पानी र सरसफाइको समस्या जहाँ पनि उही हो। तत्कालै नभए पनि राम्रो हुँदै गएपछि हामी सहयोग गर्छौं भन्दै उहाँहरूलाई मनायौं।'
यसरी विस्तार गतिमा आफ्नो काममा लागिरहेका विनय र बबीलाई एउटा राम्रो अवसर जुर्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्मार्ट अर्वन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज २०१८’ आयोजना गर्यो।
‘हामी यसअघि विद्यार्थीहरूसगँ मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थियौं। महानगरको उक्त कार्यक्रममा त वर्षौं काम गरेका अनुभवीहरू हुनुहुन्थ्यो,’ विनयले भने ‘ त्यही पनि हामीले के ने हार्ने हो र भन्दै भाग लियौं।'
पहिलो चरणमा साढे चार सयभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धीबाट छानिएका २४ समूहमा उनीहरू परे। उनीहरूलाई 'रनर अप' सम्म होइन्छ कि भन्ने आश जाग्यो। तर उनीहरूले समुदाय तथा वातावरणमा विषयगत विजेता नै बनेर २ लाख रूपैयाँ जिते। चार वटा विषयगत विजेताबाट छानिएर समूह विजेता बन्दै अरू पाँच लाख जिते।
'पहिले ५० हजार पाउँदा त खुसी थियौं, यो त सात लाख थियो,' विनयले खुसी हुँदै सुनाए।
पुरस्कार जिते पनि मुख्य काम अब सुरू भएको उनीहरूले सुनाए। ‘अब हाम्रो पहिलो काम एप्सलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउने हो,’ उनीहरूले भने।
विनय र बबीले चार वर्षमा दुई चरणमा काम गर्न योजना बनाएका छन्।
‘काठमाडौंमा दुई हजार रेस्टुरेन्ट दर्ता छन्। पहिलो दुई वर्षमा काठमाडौं महानगरका २० प्रतिशत मात्र रेस्टुरेन्टसँग मात्र समन्वय गर्न सकियो भने हामीसँग चार सय शौचालय हुन्छन्,' विनयले भने, 'त्योबाहेक पेट्रोल पम्प, अस्पताल, बैंक लगायतसँग पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ।'
अर्को दुई वर्ष भने उनीहरूको योजना यहाँका घरहरूमा केन्द्रित छ। काठमाडौंमा चार लाख घर छन्। एक प्रतिशतसँग सम्झौता भए पनि चार हजार घर हुन्छन्।
‘सम्झौता भएका घरमा एप्स चलाउनेहरूले शौचालय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोगकर्ताले केही शुल्क तिर्नुपर्छ,' विनयले भने, 'हामीले नुहाउन मिल्ने सुविधा पनि होस् भनेर काम गरिरहेका छौं।'
आफूहरूले योजना अनुरूप काम गर्न पाए महानगरपालिकाहरूले शौचालय बनाउने खर्च कम हुने उनी बताउँछन्।
'अब एप्पलका लागि पनि एप्स बनाउँदै छौं। यसमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले शौचालय कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हुनेछ,' विनयले भने।
उनीहरूको यो एप काठमाडौंमा पाँच सय पटक डाउनलोड भइसकेको छ। उनीहरूबाटै 'फ्रेन्चाइज' लगेर श्रीलंकाको एक कम्पनीले काम थालिसकेको उनले जानकारी दिए।
'एपको राम्रो प्रचार हुँदै गए कम्तीमा सफाइ र पानी खर्चको जिम्मेवारी लिने सोच बनाएका छौं,’ विनयले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६, १५:०३:००